GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish Fon French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Otu n’ime amaokwu Baịbụl ndị kacha nyere m aka ịkwụsị ichegbu onwe m bụ Matiu 6:​25-34. N’amaokwu nke 27, Jizọs jụrụ, sị: “Ònye n’ime unu pụrụ ịgbakwụnye otu kubit * n’afọ ndụ ya site n’ichegbu onwe ya?”
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú ịgụ Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ga-esi nyere gị aka idi nsogbu ndị bịaara gị?​—Abụ Ọma 94:19.
Mụ na ndị ezinụlọ anyị bụ Ndịàmà Jehova. Ndị ọgbakọ anyị nyeere anyị ezigbo aka n’oge ahụ papa m nwụrụ. Ha nyere anyị nri, nọnyekwara anyị ruo ogologo oge. Otú ha si nyere anyị aka mere ka obi sie mụ ike na Ndịàmà Jehova bụ ezigbo Ndị Kraịst.​—Jọn 13:35.
Ebe gbara m ezigbo ume na Baịbụl bụ 2 Ndị Kọrịnt 4:​17, 18. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụ ezie na mkpagbu ahụ na-adịru nwa oge, dịkwa mfe, ọ na-arụpụtara anyị ebube nke na-adịwanye ukwuu, nke na-adịrukwa mgbe ebighị ebi; ebe anyị lekwasịrị anya, ọ bụghị n’ihe a na-ahụ anya, kama n’ihe a na-adịghị ahụ anya. N’ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.”
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú nsogbu bịaara gị nwere ike isi nyere gị aka ichebara ihe ndị i kpebiri iji ndụ gị eme echiche?​—1 Jọn 2:17.
^ Otu kubit dị ihe dị ka sentimita iri anọ na ise ma ọ bụ inch iri na asaa na ọkara.
Idi ọnwụ nne ma ọ bụ nna adịghị mfe. Ma, olee ihe ga-enyere ndị na-eto eto aka ma ọ bụrụ na mwute na obi ọjọọ ya na ya so abịa?
Olee otú Baịbụl si nyere ndị na-eto eto atọ aka idi ọnwụ nne na nna ha?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme ma Nnukwu Nsogbu Bịara M?
ijwyp isiokwu 45